China Cell Total RNA Isolation Kit ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူ |Foregene
ဆဲလ်စုစုပေါင်း RNA သီးခြားခွဲထုတ်ကိရိယာ
အခန်းအပူချိန် (15-25 ℃) တွင်လုပ်ဆောင်သည်
မြင့်မားသော RNA အထွက်နှုန်း
အမြန်- 11 မိနစ်အတွင်း ထုတ်ယူမှုကို အပြီးသတ်ပါ။
ဘေးကင်းရေး- အော်ဂဲနစ် ဓာတုပစ္စည်း မရှိပါ။
ဤကိရိယာသည် 96၊ 24၊ 12၊ နှင့် 6-တွင်းပြားများတွင် မွေးမြူထားသောဆဲလ်များမှ သန့်စင်ပြီး အရည်အသွေးမြင့် RNA စုစုပေါင်း RNA ကို ထိရောက်စွာ ထုတ်ယူနိုင်စေသည့် Foregene မှ ဖန်တီးထားသော လှည့်ကော်လံနှင့် ဖော်မြူလာကို အသုံးပြုထားသည်။
ကိရိယာအစုံသည် supernatant နှင့် cell lysate ကို အလွယ်တကူ ခွဲထုတ်နိုင်ပြီး မျိုးရိုးဗီဇ DNA ကို ချည်နှောင်ကာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည့် ထိရောက်သော DNA-Cleaning Column ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။လုပ်ဆောင်ချက်သည် ရိုးရှင်းပြီး အချိန်ကုန်သက်သာသည်။.
Tသူသည် RNA-only Column သည် ထူးခြားသောဖော်မြူလာတစ်ခုဖြင့် RNA ကို ထိထိရောက်ရောက် ချည်နှောင်နိုင်သည်။နမူနာအများအပြားကို တပြိုင်နက်တည်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
Kit ဖွဲ့စည်းမှု RE-03111 RE-03114
ကြားခံ cRL1* 25 mL 100 ml
ကြားခံ cRL2 15 mL 60 ml
ကြားခံ RW1* 25 mL 100 ml
ကြားခံ RW2 24 mL 96 mL
RNase-Free ddH2O 10 mL 40 mL
RNA-Only ကော်လံ 50 ၂၀၀
DNA သန့်ရှင်းရေးကော်လံ 50 ၂၀၀
ပို့ချသည်။ 1 1
* Buffer cRL1 နှင့် Buffer RW1 တို့သည် ယားယံစေသော chaotropic ဆားများပါသောကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ လက်အိတ်များဝတ်ဆင်ပြီး အကာအကွယ်အစီအမံများပြုလုပ်ပါ။
■ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို အခန်းအပူချိန် (၁၅-၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) တွင် ရေခဲရေချိုးခြင်းနှင့် အပူချိန်နိမ့်သော အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိဘဲ လုပ်ဆောင်သည်။
■ အစုံအလင်တစ်ခုလုံးသည် RNase-Free ဖြစ်ပြီး RNA ပျက်စီးခြင်းအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုပါ။
■ DNA-Cleaning Column သည် DNA ကို အတိအကျ ချည်နှောင်ထားသောကြောင့် အစုံလိုက်သည် genomic DNA ညစ်ညမ်းမှုကို အပို DNase မထည့်ဘဲ ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
■ မြင့်မားသော RNA အထွက်နှုန်း- RNA သီးသန့်ကော်လံနှင့် ထူးခြားသောဖော်မြူလာသည် RNA ကို ထိထိရောက်ရောက် သန့်စင်ပေးနိုင်သည်။
■ မြန်ဆန်သောအမြန်နှုန်း- လည်ပတ်ရလွယ်ကူပြီး 11 မိနစ်အတွင်း ပြီးမြောက်နိုင်သည်။
■ ဘေးကင်းရေး- အော်ဂဲနစ် ဓာတ်ပစ္စည်းများ မလိုအပ်ပါ။
■ အရည်အသွေးမြင့်- သန့်စင်ထားသော RNA သည် ပရိုတင်းနှင့် အခြားအညစ်အကြေးများ ကင်းစင်ပြီး သန့်စင်ပြီး အမျိုးမျိုးသော နောက်ဆက်တွဲ စမ်းသပ်မှုများကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
၎င်းသည် 96၊ 24၊ 12 နှင့် 6- well plates များတွင် မွေးမြူထားသောဆဲလ်များမှ စုစုပေါင်း RNA ကို ထုတ်ယူသန့်စင်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။
Cell Total RNA Isolation Kit ၏ agarose gel ဘက်ထရီ diagram သည် အထက်ပါ မတူညီသော ဆဲလ်နံပါတ်များ၊ 20μl ထုထည် elution၊ 2μl သန့်စင်ထားသော စုစုပေါင်း RNA 1% ကို ကုသပေးပါသည်။
ပစ္စည်းအစုံကို အခန်းအပူချိန် (15-25 ℃) သို့မဟုတ် 2-8 ℃ (24 လ) ကြာအောင် သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
Buffer cRL1 ကို4℃ တွင် 2-hydroxy-1-ethanethiol (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) ပေါင်းထည့်ပြီးနောက် 1 လကြာ သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
ယခင်- တိရစ္ဆာန်စုစုပေါင်း RNA သီးခြားခွဲထုတ်ကိရိယာ
နောက်တစ်ခု: Plant Total RNA Isolation Kit
ဆဲလ် RNA အထီးကျန်ပစ္စည်းအစုံ
ဆဲလ်စုစုပေါင်း RNA သန့်စင်မှုသေတ္တာများ
RNA ကို မထုတ်ယူရသေးပါ သို့မဟုတ် RNA အထွက်နှုန်း နည်းပါသည်။
တစ်ရှူးနမူနာ RNA ပါဝင်မှု၊ လည်ပတ်မှုနည်းလမ်း၊ elution ပမာဏ၊ စသည်ဖြင့် ပြန်လည်ရယူခြင်းဆိုင်ရာ ထိရောက်မှုကို ထိခိုက်စေသည့် အကြောင်းအရင်းများစွာ ရှိလေ့ရှိပါသည်။
1. ရေခဲရေချိုးခြင်း သို့မဟုတ် cryogenic (4°C) လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အာရုံစူးစိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အကြံပြုချက်- လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး အခန်းအပူချိန် (15-25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) တွင် လုပ်ဆောင်ပါ၊ ရေခဲရေချိုးခြင်းနှင့် အပူချိန်နိမ့်သောနေရာတွင် အာရုံစူးစိုက်မှု မပြုလုပ်ပါနှင့်။
2. မသင့်လျော်သောနမူနာထိန်းသိမ်းမှု သို့မဟုတ် နမူနာသိမ်းဆည်းချိန် အလွန်အကျွံ။
အကြံပြုချက်- နမူနာများကို -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် သိမ်းဆည်းပါ သို့မဟုတ် နိုက်ထရိုဂျင်အရည်တွင် အေးခဲပြီး ထပ်ခါတလဲလဲ အေးခဲနေသော ဖျော်ရည်များကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။RNA ထုတ်ယူရန်အတွက် လတ်ဆတ်သော တစ်သျှူး သို့မဟုတ် ဆဲလ်များကို အသုံးပြုရန် ကြိုးစားပါ။
3. နမူနာ lysis မလုံလောက်ပါ။
အကြံပြုချက်- တစ်ရှူးများကို တစ်ရှူးများကို တစ်သားတည်းဖြစ်စေသောအခါ၊ တစ်ရှူးကို လုံလုံလောက်လောက် တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီး RNA ထွက်လာမှုကို ရှင်းပြရန် တစ်ရှူးဆဲလ်များ လုံလောက်စွာကွဲကြောင်းသေချာပါစေ။
4. သာလွန်ကောင်းမွန်မှုကို မှန်ကန်စွာ ထည့်မထားပါ။
အကြံပြုချက်- RNase-Free ddH ကို အတည်ပြုပါ။2O သည် သန့်စင်သောကော်လံအမြှေးပါး၏အလယ်သို့ dropwise ပေါင်းထည့်သည်။
5. အကြွင်းမဲ့ အီသနော၏ မှန်ကန်သော ပမာဏကို Buffer RL2 သို့မဟုတ် Buffer RW2 တွင် ထည့်မထားပါ။
အကြံပြုချက်- ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ၊ အကြွင်းမဲ့ အီသနော၏ မှန်ကန်သော ပမာဏကို Buffer RL2 နှင့် Buffer RW2 သို့ ထည့်ပြီး အစုံအလင်ကို အသုံးမပြုမီ ကောင်းစွာ ရောမွှေပါ။
6. တစ်ရှူးနမူနာ သောက်သုံးမှုသည် မသင့်လျော်ပါ။
အကြံပြုချက်- တစ်ရှူး 10-20 မီလီဂရမ် သို့မဟုတ် (1-5) × 10 ကို အသုံးပြုပါ။6တစ်သျှူး 500 μl ကြားခံ RL1 လျှင် ဆဲလ်များ အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကြောင့် RNA ထုတ်ယူမှုကို လျော့နည်းစေသည်။
7. မသင့်လျော်သော elution အသံအတိုးအကျယ် သို့မဟုတ် မပြည့်စုံသော elution။
အကြံပြုချက်- သန့်စင်သောကော်လံ၏ elution ပမာဏသည် 50-200 μl;elution အကျိုးသက်ရောက်မှု ကျေနပ်ဖွယ်မရှိပါက၊ preheated RNase-Free ddH ကိုထည့်ပြီးနောက် အခန်းအပူချိန်နေရာချထားချိန်ကို သက်တမ်းတိုးရန် အကြံပြုထားသည်။2O၊ ဥပမာ ၅-၁၀ မိနစ်။
8. သန့်စင်သောကော်လံတွင် Buffer RW2 ဆေးကြောပြီးနောက် အီသနောအကြွင်းအကျန်ရှိသည်။
အကြံပြုချက်- Buffer RW2 ဆေးကြောပြီးနောက် အီသနောအကြွင်းအကျန်များ ရှိနေပါက၊ ပိုက်အလွတ်ကို 1min ပတ်ထားရန်၊ ပိုက်အလွတ် centrifugation လုပ်ဆောင်ချိန်ကို 2min အထိ တိုးနိုင်သည် သို့မဟုတ် သန့်စင်ထားသောကော်လံကို အခန်းအပူချိန်တွင်5မိနစ်ကြာ ထားရှိနိုင်ပါသည်။ အီသနော။
သန့်စင်ထားသော RNA သည် ပျက်စီးသွားပါသည်။
သန့်စင်ထားသော RNA ၏ အရည်အသွေးသည် နမူနာကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ RNase ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် ခြယ်လှယ်ခြင်းစသည့် အချက်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။
1. တစ်ရှူးနမူနာများကို အချိန်မီမသိမ်းဆည်းပါ။
အကြံပြုချက်- တစ်ရှူးနမူနာများ သို့မဟုတ် ဆဲလ်များကို စုဆောင်းပြီးနောက် အချိန်မီအသုံးမပြုပါက -80°C သို့မဟုတ် အရည်နိုက်ထရိုဂျင်အရည်ဖြင့် ချက်ခြင်း သိမ်းဆည်းပါ။RNA ထုတ်ယူရန်အတွက် ဖြစ်နိုင်သည့်အခါတိုင်း အသစ်ထုတ်ထားသော တစ်ရှူး သို့မဟုတ် ဆဲလ်နမူနာကို အသုံးပြုပါ။
2. တစ်ရှူးနမူနာများကို ထပ်ခါတလဲလဲ အေးခဲအောင်ပြုလုပ်ခြင်း။
အကြံပြုချက်- တစ်ရှူးနမူနာများကို သိမ်းဆည်းသည့်အခါ၊ ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို အတုံးသေးသေးလေးများဖြစ်အောင် လှီးဖြတ်ပြီး နမူနာကို ထပ်ခါတလဲလဲ အေးခဲသွားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့် RNA ၏ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ရှောင်ရှားရန် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုသည့်အခါ အပိုင်းပိုင်းတစ်ခုအား ဖယ်ရှားရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
3. ခွဲစိတ်နေစဉ်အတွင်း တစ်ခါသုံးလက်အိတ်များ၊ မျက်နှာဖုံးများ စသည်တို့ကို ဝတ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် RNase ကို မိတ်ဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် မသုံးပါ။
အကြံပြုချက်- RNA ထုတ်ယူခြင်း စမ်းသပ်မှုများကို သီးခြား RNA ခြယ်လှယ်သည့် အခန်းများတွင် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ပြီး စမ်းသပ်မှုမတိုင်မီ ဇယားကို ရှင်းလင်းထားသည်။
RNase ၏နိဒါန်းကြောင့်ဖြစ်ရသည့် RNA ပျက်စီးမှုကိုလျှော့ချရန် တခါသုံးလက်အိတ်များနှင့် နှာခေါင်းစည်းများ ဝတ်ဆင်ပါ။
4. အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ဓာတ်ပစ္စည်းများသည် RNase နှင့် ညစ်ညမ်းနေပါသည်။
အကြံပြုချက်- ဆက်စပ်စမ်းသပ်မှုများအတွက် Animal Total RNA Isolation Kit အသစ်ဖြင့် အစားထိုးပါ။
5. RNA ခြယ်လှယ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် အာရုံခံပြွန်များ၊ အကြံပြုချက်များ စသည်တို့သည် RNase နှင့် ညစ်ညမ်းနေပါသည်။
အကြံပြုချက်- RNA ထုတ်ယူရာတွင် အသုံးပြုသည့် centrifuge ပြွန်များ၊ အကြံပေးချက်များ၊ ပိုက်ပိုက်များ စသည်တို့သည် RNase-Free ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပါ။
သန့်စင်ထားသော RNA သည် ရေအောက်ပိုင်းစမ်းသပ်မှုများကို အကျိုးသက်ရောက်သည်။
သန့်စင်ရေးကော်လံဖြင့် RNA သန့်စင်ခြင်း၊ ဆားအိုင်းယွန်းများ၊ ပရိုတင်းဓာတ်ပါဝင်မှု များလွန်းပါက၊ ရေအောက်ပိုင်းစမ်းသပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည်- reverse transcription,Northern Blot et al.
1. ထုတ်ယူထားသော RNA တွင် ဆားအိုင်းယွန်း အကြွင်းအကျန်များ ပါရှိသည်။
အကြံပြုချက်- မှန်ကန်သော အီသနော၏ ပမာဏကို Buffer RW2 တွင် ထည့်သွင်းပြီး လည်ပတ်ရန်အတွက် ဖော်ပြထားသည့် centrifugal အမြန်နှုန်းဖြင့် သန့်စင်သောကော်လံ2ခုကို လျှော်ပေးကြောင်း အတည်ပြုပါ။ဆားအိုင်းယွန်းအကြွင်းအကျန်ရှိပါက၊ သန့်စင်သည့်ကော်လံကို Buffer RW2 တွင် အခန်းအပူချိန်တွင်5မိနစ်ထားကာ ဆားညစ်ညမ်းမှုကို အမြင့်ဆုံးဖယ်ရှားနိုင်စေရန် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုပြုလုပ်ပါ။
2. elutioned RNA တွင် Ethanol အကြွင်းအကျန်။
အကြံပြုချက်- ကြားခံ RW2 ဆေးကြောပြီးနောက်၊ လည်ပတ်မှုအတွက် ဖော်ပြထားသည့် centrifugation speed ဖြင့် ပြွန်ဗလာ centrifugation လုပ်ဆောင်မှုကို အတည်ပြုပါ၊ အီသနောအကြွင်းကျန်ရှိနေပါက ပြွန်အလွတ် centrifugation လည်ပတ်ချိန်ကို2မိနစ်သို့ တိုးမြှင့်ပါ၊ သို့မဟုတ် အခန်းအပူချိန်တွင်5ထားထားပါ။ ဍ